Mampihena ny elanelana eo amin’ny manankarena sy ny mahantra ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2018 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Português, Български, Italiano, Swahili, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, Français
Olona an'arivony maro midina an-dalambe hanohitra ny hakelin'ny karama, ny halafon'ny fiainana, ny fahaverezan'asa sy ny tsy fahampian'ireo tombontsoa ara-tsosialy. Tohin'ireo fepetra tany Gresy, sy ny taorian'ny lohataona arabo ve? Tsia, mpanao fihetsiketsehana ho an'ny fitoviana bebe kokoa ao Afrika atsimon'i Sahara ireo, ny vao haingana tao Borkina Faso. Eny tokoa, tena mampiahiahy fatratra ao Afrika sy manerana izao tontolo izao ny elanelana mihamitombo eo amin'ny manankarena sy ny mahantra. Mihevitra ny Afrikanina maro fa mihalehibe ireo tsy fitoviana ireo, mihamanankarena ny vitsy an'isa kanefa tsy mitsahatra mtiombo ny laharan'ireo mahantra. Tena manaitra kokoa ny tsy fitoviana ao Afrika sy ny tsy fihetsehan'ny tahan'ny fahantrana amin'ny haavony ambony indrindra nandritra ny taompolo maro, na nisy aza ny fitomboan'ny harinkarena faobe tsy azo notsinontsinoavina tao amin'ny kaontinanta.
An'ny zanak'i Obiang, filohan'ny Ginea Ekoatorialy ilay sambo faharoa lafo indrindra manerantany – sehatra ho an'ny daholobe
Manazava ny hasosorana ankapobeny ny mpamoaka lahatsoratry ny Observateur Paalga ao Borkina Faso:
Ny sasany mitaingina fiaramanidina mba handehanana any amin'ny dokotera hanasitrana sery raha toa ka mihinana pisanilia hatramin'ny fakany kosa ny sasany satria tsy manam-bola handehanana mitsabo tazo tsotra izy ireo.
Kanefa andrasana toy ilay paradisan-karena vaovaon'ny toekarena manerantany ilay mety ho fivoarana any Afrika. Manangana sary tsara an'ilay hery ananan'i Afrika ny Banky Iraisam-pirenena saingy mampitandrina amin'ireo tsy fitoviana mbola goavana foana :
Mbola matanjaka foana ary tokony hahatratra 4.9% amin'ny 2013 ny fitomboana ara-toekarena any Afrika atsimon'i Sahara, araka ny vinavina. Eo amin'ny ampahatelon'ny firenena ao amin'ny faritra no ahitana fitomboana eo amin'ny 6% no miakatra eo ary efa mahazatra ankehitriny ny mahita firenena afrikana miseho ao anivon'ireo firenena izay manana fitomboana anisan'ny haingana indrindra eran-tany [..] (kanefa ilay tatitra) manamarika fa mbola ao foana ny fahantrana sy tsy fitoviana « amin'ny haavo tsy azo ekena, toy ny fitaredretran'ny fivoarana vita mba ho fampihenana izany ». Afrikana iray amin'ny roa no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao.
Ny tsy fitoviana karama ao amin'ny tanàna afrikana araka ny fanadihadiana frantsay – sehatra ho an'ny daholobe
Manazava i Denis Cogneau, mpikaroka ao amin'ny Ivontoerana Fikarohana Ho an'ny Fampandrosoana (IRD) fa manana fiaviana ara-tantara voafaritra mazava tsara ireo tsy fitoviana ao Afrika ireo :
Nandova andrim-panjakana ara-toekarena sy ara-tsosialy mpitrandraka, izay voafaritry ny fifanoherana tena voamariky ny sehatrasa ara-dalàna kely, sy sehatrasa tsy ara-dalàna midadasika ahitana ny tantsaha, ireo Fanjakana taorian'ny fanjanahantany. Toy izany ihany koa, voafaritry ny fifangarihana ara-panabeazana sy ara-pahasalamana ny firenena maro hafa, fifangarihana izay voafaritry fisiana miarak'ireo toeram-pianarana ambony lafo vidy ho an'ny sangan'olom-panjakana sy tsy miankina izay miorina ao an-drenivohitra, sy ny sehatra fototra (sekoly ambaratonga fototra sy dispansera) tena tsy ampy mpiasa, tsy voakarakara tsara ary tsy voatsinjara tsara manerana ny faritra. Ao anatin'izany toe-javatra izany, nitàna anjara asa mampidi-doza ny sekoly, satria izy (ary mbola izy ihany) no lakile amin'ny fidirana, «tsy amin'ny asa irery ihany ao amin'ny sehatra maoderina, fa amin'ny toerana ao amin'ny sehatry ny Fanjakana sy ny fahefana ara-politika, manaraka ao anatin'izany ireo fivoaran'ny fiarahamonina eoropeana». Midika famokarana bebe kokoa sangan'olona ara-politika maro, noho izany, ny tsy fitovian'ny vintana ho tafiditra.
Inona ary no fepetra azo raisina mba hampihenana ireo tsy fitoviana ireo ?
Matetika odian-tsy hita nta ena fahafantarana tsara ny zavamisy eo an-toerana mitarika mankany amin'ny fitomboan'ny tsy fitoviana. Mba hampihenana ny anton'ireo tsy fitoviana ireo, napetraky ny fikambanana maro samihafa ny fitaovana fanarahamaso ny haavon'ny faripiainan'ireo mponina marefo.
Any Madagasikara, soskevitry ny CIRAD ny famoronana fanarahamaso iay mba hanarahana maso sy hanatsarana ny fari-piainana any amin'ny faritra ambanivohitra :
Fitaovana fanarahamaso sy fandinihana ny toe-piainan'ireo tokantrano ambanivohitra ny Tambajotran'ny Fanarahamaso any Ambanivohitra (ROR). Iray amin'ny tanjony fototra ny fanakàrana ny fivoaran'ny toe-javatra iainan'ireo tokantrano ambanivohitra sy ny fiantraikan'ireo fepetra ho an'ny daholobe ary koa ny dona avy any ivelany eo amin'ireo tokantrano ireo. Samy ahitana famotorana an-tsokajy misy tokantrano miisa 500 eo amin'ny toerana nosafidiana tamin'ny fomba nosainina tsara miaraka tamin'ny mpanohana ara-bola. Mandrakotra ireo toe-piainana fototra isankarazany amin'ny fiainan'ireo tokantrano ireo mandritra ny 12 volana ilay andiam-panontaniana. Ahafahana manao fampitahana ny toe-javatra amin'ny fotoana (isan-taona) sy eny amin'ny toerana (eo amin'ireo samy fanarahamaso) ireo vokatra azo.
Any Borkina Faso, hita toy ny sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy satria asehon'ireo fandinihana fa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny fiainan'ny firenena. Manazava ireo hetsika nataon'ny Fikambanana Dakupa tao amin'ny faritanin'i Bolgo mikasika izany i Bougnan NAON :
Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hahafahana mamorona tambajotra mandeha tsara miaraka aminà mpikambana matihanina mba hisintonana ireo toe-tsaina/fihetsika nentim-paharazana, ary koa politika sy tetikady eny an-toerana hiadiana amin'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy […] (Ny tanjona dia ny): hanofana mpilalao fototra miisa 50 eny an-toerana amin'ireo tetikady fandraisana anaty kajikajy ny miralenta ary fanatanterahana tetikasa sy fandaharanasa isan-taona, handamina fanarahamaso fanamarinana mba hanamora ny fampiharana tsara ilay fomba fiasa (fifehezana ireo fitaovana sy famantarana ny hetsika sahaza momba ny miralenta) izay ataon'ireo Fikambanana Tsy Miankina ho tombontsoan'ireo kendreny.